घिनलाग्दो राजनीति सुदुरका जनतालाई मान्य छैन भिम रावलज्यु - Saptakoshionline
घिनलाग्दो राजनीति सुदुरका जनतालाई मान्य छैन भिम रावलज्यु
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भाद्र ०८, २०७५ समय: १२:४७:५१
सोमबार कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटनामा संलग्न भएका भनिएका व्यक्तिका विषयमा विवाद बढेपछि कञ्चनुर झन तनावग्रसत बन्यो । बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न नसकेको र निर्दोषलाई फसाउन खोजेको भन्दै पीडित परिवारल र स्थानीयले आक्रोस व्यक्त मात्रै गरेनन् मंगलबारदेखि कञ्चनपुर सदरमुकाम महेन्द्रनगर आन्दोलनको रापमा तात्यो । १३ वर्षीय किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्यामा प्रहरीले वास्तविक अपराधीलाई बचाउन खोजेको भन्दै स्वयं व्यापारीहरुले स्वतस्फूर्त रुपमा बजार–व्यावसाय बन्द गरे । मंगलबारको प्रदर्शनमा प्रहरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि रहेका स्थानीयमाथि आश्रुग्यास प्रहार गर्यो । बिहिबार प्रहरी प्रसाशनले आन्दोलनकारी माथी लाटी बर्सायो । सातसय भन्दा बढि अश्रुग्यास प्रहार मात्रै गरेन गोली समेत चलायो । प्रहरीको गोलीबाट चार जना घाइते भए । झडपमा थप पाँच जना घाइते भए । हत्यारालाई कार्वाहीको माग गर्दै आन्दोलन गर्दा स्थानीयले प्रहरीको गोली खानु प¥यो ।
प्रहरी संयमित भएर घटनाको सत्यतथ्यसम्म पुग्नु त कता कता स्थानीइलार्य डर त्रास र धम्काउदै गोली बर्साएर अझै घटना हिंश्रक बनायो । प्रहरी प्रशासनले स्थानीयमाथि जवरजस्ती गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई कञ्चनपुरबाट फिर्ता बोलाउनु प¥यो । अहिले कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुख फेरिएका छन् । तर अझै पनि घट्ना घटना ढाकछोप गर्न खोजिदै छ । निर्मलाको बलात्कार अनि हत्या एक मानसिक सन्तुलन गुमाएका व्यक्तिले गर्नै सक्दैनन् । तयो पनि जुन व्यक्तिलाई देख्ने वित्तिक्कै निर्मला मात्र होइन त्यो बाटो अहिड्ने प्राय महिलाहरु डराउथे । तयस्तो व्ययक्तिलाई निर्मलाले साइकलकाहे चैन बनाउन कसरी दिदन सकिन । अनि ति मानसिक सन्तुलन गुमाएका दिलिप विष्टले निर्मलालाई उखुबारी सम्म लौजान लाग्दा निर्मला रोइ कराइ त गरिन होला तर उनको कुनै पनि आवाज स्थानीयले किन सुनेन् ? अझ संकाको कुरो त के छ भने एक मानसिक सन्तुलन गुमाएका व्यात्तिलाई बलात्कार गर्दा कण्डम लगाउनु पर्छ भन्ने ज्ञान आउथ्यो भने सडकमा बरालिएर हिड्ने थिएनन् होला । फेरी पनि भन्नु पर्दा अहिले सम्मका जति पनि बलात्कारका घटना बाहिर आएका छन् कुनै पछि घट्नामा बलात्कारीले कण्डम प्रयोग गरिएको खासै बाहिर आउदैन ।
नेकपाका प्रभावशाली नेता भनेर चिनिने र सुदुरका जनताले् मानेका नेता भिम रावलको अभिव्यत्तिले पुष्ट गर्छ हत्याराको जोगाउमा कसले कस्तो राजनीति गर्दै छ भनेर । काठमाण्डौमा बसेर सुदुरमा राजनिति गर्ने नेता भिम रावलले काङ्ग्रेसले निर्मला हत्या घट्नामा राजनीति ग¥यो ।
यदि दिलिपले कण्डम प्रयोग नै गरेका थिए भने पनि जुन दिन निर्मलालाई उखुबारीमा भेटियो त्यो दिन किन भेटिएन त्यो कण्डम र दिलिपले लगाएको सर्टको कपडाको टुक्रा ? साउन १० गते देखी भाद्र ४ गते सम्म आइपुग्दा निर्मलाको हत्या गरिएको भनिएको ठाउँ उखुबारीमा कति पटक प्रहरी गयो , कतिपटक पत्रकारहरु पुगे । कतिपटक सिआइविको टोली पुग्यो । नागरिक समाज, गाउँका अगुवा भलाधमी सबै पुगे तर कुनै प्रमाण भेटिएको थिएन । एकएक ४ गते प्रहरी निर्मलाको घरमा पुगेर घटनास्थलमा हत्याराको प्रमाण भेटियो भन्दै आउनु र २ मिनेटमै प्रमाण भेटियो भनेर चिच्याउनुले प्रहरीमाथी निर्मलाका बुवालाई ले घट्नास्थललमै शंका लागि सकेको थिाये । झन कञ्चनपुरका एसपि प्रमुख दिल्लिराज विष्टले दिलिप विष्टमाथी किटानी जोहेरी दिनुस भनेर धम्काउने काम भएपछि आन्दोलित हुनुप¥यो ।
एकतिर प्रहरीले ढाकछोप गर्नु र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु कुर्लिनुको पछाडि ठूलै खेल होकी भन्ने आशंका पैदा भएको छ । किनकी शुक्रबार बिहान ६ बजे नेपाली रेडियो नेटर्वकको कार्यक्रम नेपाली बहसमा पत्रकार रिसि धमलासंगको कुराकानीमा नेकपाका प्रभावशाली नेता भनेर चिनिने र सुदुरका जनताले् मानेका नेता भिम रावलको अभिव्यत्तिले पुष्ट गर्छ हत्याराको जोगाउमा कसले कस्तो राजनीति गर्दै छ भनेर । काठमाण्डौमा बसेर सुदुरमा राजनिति गर्ने नेता भिम रावलले काङ्ग्रेसले निर्मला हत्या घट्नामा राजनीति ग¥यो । प्रहरीलाई अनुसान्धान गर्न दिएन । खाली स्थानीयलाई उचाल्ने काम ग¥यो भन्नुभयो । म भन्न चाहन्छु भिमरावल ज्यु, साउन १० गतेदेखी भाद्र १० आउनै लाग्दा सम्म प्रहरलिे गरेको अनुसन्धान यहि हाहे ।
एक मानसिक सन्तुलन गुमाएको मानीसलाई जवर्जति अपराधिको मुकुण्डो ओडाएर शुक्ष्म अनुसन्धान कसरी भयो ? यसकै बिरोधमा उत्रिएको होइन र कञ्चनपुरमा जनता ? बिहानै सुनेको तपाईको यो अभिव्यत्तिले मेरो त कंचट तातेको छ भने जिल्लामा प्रहरीको गोली खाने ति सोझा जनता र जसको परिवार शोकमा डुबेको छ उनिहरुको मनामा कति बिझेहानान् तपाइका यि शब्द बाणहरु भन्न सकिन्न । हत्यारा पत्ता लगाएर कार्वाही गर्नका लागि दुईतिहाईको सरकार जोडतोडले लाग्नुपर्ने बेलामा नेकपाका नेताहरु त्यसमा पनि प्रदेश ७ कै एउटा जल्ल्दो बल्दो नेता हत्यारा बचाउन भूमिका खेलिरहेका छन् । काँग्रेसले सत्यतथ्य छानबिन गर्न माग गरिरहेका बेलामा आन्दोलन दवाउन नेकपाले भूमिका खेलिरहेको स्वयं रावलका गतिविधिले स्पष्टै पार्छ । त्यसैले भन्न चाहन्छु भिम रावल ज्यु यस्तो घिनलाग्दो राजनीति सुदुरका जनतालाई चाहिएको छैन । धन्न तपाइको राजनिति , सक्नुहुन्छभने समस्या समाधान तर्फ लाग्नुस, नभए अरुलाई काम गर्न दिनुस् । यो अभिव्यक्तिले वास्तविक हत्यारालाई बचाउन कतै भिम रावलको हात त छैन कञ्चनपुरवासीको शंकालु दृष्टि तपाइतिर नतेर्सियोस् । तपाई नेकपाको मात्रै नेता होइन सम्पुर्ण सुदुरका जनताको आँसा र भरोसा हो । नभुल्नुस सुदुरकै जनताले अमुल्य मत दिएर तपाइलाई यो ठाउँमा यसरी बोल्न सक्ने बनाएका हुन् । हैन भने तपाइकै अछाममा गाई चराउदै गरेको हर्केले किन बोल्न सक्दैन यो कुराहरु ? मेरो बिन्ती भिमरावल ज्यु तपाई हामी सवैले रुचाएको सुदूरको नेतृत्व हो । त्यसैले कञ्चनपुर घटनालाई पार्टी राजनीतिबाट टाढा भएर हेरिदिन बिनम्र अनुरोध गर्दछु ।
मलेसियाबाट अस्तुसहित १९ वटा शव नेपाल आयो
मलेसियामा डिसेम्बर महिनामा मृत्यु भएका नेपाली श्रमिकको शव काठमाडौं आइपुगेको छ । एक जनाको अस्तुसहित १९ जनाको शव आइपुगेको ...
लेटाङमा बुलेरो दुर्घटना एक जनाको मृत्यु, १६ जना घाइते
मोरङको लेटाङमा बुलेरो पिकअप दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा १६ जना घाइते भएका छन् । शुक्रबार बेलुका ल...
सामुदायिक अस्पतालले आफनै भवनबाट सेवा सञ्चालन
इटहरी । दुइ दसक अघि देखि इटहरीमा सञ्चालन गरिदै आएको सामुदायिक अस्पतालले आफनै भवनबाट सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । इटहरी तथा...